Daawo:- Rag Ajaanib ah oo ay Gacanta ay ku soo Dhigeen Ciidamada Maamulka Jubbaland - Hablaha Media Network
Daawo:- Rag Ajaanib ah oo ay Gacanta ay ku soo Dhigeen Ciidamada Maamulka Jubbaland
HMN:- Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa shalay galabnimadii waxa ay Magaalada Kismaayo ku soo bandhigeen 10 nin oo ajaaniib ah, kuwaasi oo si aan sharci ahayn kaga kalluumeysanayay Xeebaha Somaliya.
Raggan, ayaa waxaa la sheegay in doonidii ay la socdeen ku soo caarisay Xeebta Kudhaa, oo hoos-tagga Degmada Badhaadhe, waxaana gacanta ku soo dhigay Ciidamada Jubbaland.
Sideed ka mid ah ajaaniibtan, ayaa waxay u dhasheen dalka Pakistan, halka labada kalana ay u dhasheen Iran, iyadoona loo soo kaxeeyay dhinaca Kismaayo, si maxkamad loogu soo taaggo.
Gudoomiyaha Degmada Badhaadhe, Maxamuud Ibraahim Faarax (Fanax), ayaa sheegay in nimankani ay wateen dooni kulluumeysi, isla-markaana ay si sharci-darro ahi uga kalluumeysanayen Xeebaha Soomaaliya.
Gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in muddo afar bilood ay raggani ka kalluumeysanayen Badda Soomaaliya, markii dambena ay cilad ku timid doonidii ay wateen. Wuxuu sheegay in doonidaasi ay ciladda ku qabsatay Badweynta Hindiya, ayna ku soo caarisay Xeebta Kudhaa.
Gudoomiye Fanax ayaa ku waramaya inay gacanta ku dhigeen in ka badan saddex boqol oo tan oo kalluun ah, isuguna jira nooca toonaha iyo libaax badeedka.
Taliyaha Ciidanka Booliska ee Degmada Kismaayo, Maxamed Naasir ayaa soo dhaweeyay tallaabada loogu soo wareejiyay tobanka nin ee ajaaniibta ah, isagoona sheegay in ay ku wareejin doonaan Hay’adda Garsoorka si ay cadaaladda u waafajiso.